Ukubaleka kukaDonnelly - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Sead
U-Sead Ungumbungazi ovelele
I-Donnelly Getaway yethu itholakala phakathi kwe-Donnelly ne-Tamarack Ski Resort. Ukubukwa kwezintaba kusuka egumbini lokuhlala kanye nobumfihlo obungenabo omakhelwane basemuva. Sitholakala engxenyeni encane ye-The Meadows eWest Mountain.
I-Lake Cascade iqhele ngemizuzu emi-2 futhi ukufinyelela emathekwini ezikebhe nokubhukuda kuseduze. I-Tamarack Ski Resort iyimizuzu engu-7 ukushayela. Jabulela ukuqwala izintaba, ukugibela ibhayisikili, ukushushuluza, ukugijima, ukubhukuda, ukugibela izikebhe, iziphethu ezishisayo, ukuzingela, nakho konke okunye okunikezwa yi-Great Idaho mountains.
Ikhaya lethu lesibili lihlotshiswe ukuze uzizwe umbozwe ngaphandle. Kusukela ifenisha yelogi kuya emakamelweni anetimu yezilwane, ifenisha yesikhumba esimnyama nezinqwaba zezingubo zokulala, uzozizwa ufudumele futhi ukhululekile futhi usekhaya. Izingane zizojabulela imidlalo eminingi yebhodi kanye ne-wii enemidlalo eminingi kanye ne-Netflix.
Amakamelo ama-3 okulala i-2 yokugezela ehlukaniswe ipulani yaphansi. Umbhede wogodo lwenkosi in master, imibhede yezigodo zendlovukazi kwamanye amagumbi. Sinemibhede engu-2 eyi-roll away single, indawo yokudlala yabancane, kanye nendlovukazi ekhuliswe kabi egumbini lokuhlala.
Kukhona umpheme ngemuva onezihlalo kanye ne-gas bbq yokugcoba ngobusuku behlobo obuhle!
Ukufinyelela kuyo yonke indawo, ngaphandle kwekhabethe lekamelo lokulala elikhulu liyatholakala ukuze ulisebenzise.
Leli yikhaya lethu lesibili. Silindele ukuthi izivakashi zethu ziphathe ikhaya lethu ngenhlonipho. Sithemba ukuthi uzoyithokozela njengami.
Leli yikhaya lamahhala lezilwane ezifuywayo. Sicela uhloniphe ikhaya lethu futhi ungezi nezilwane ezifuywayo. Uma uletha isilwane esifuywayo, kuzongezwa idiphozithi yesilwane esifuywayo engabuyi engu-$350 lapho uhlala khona. Uma noma yimuphi umonakalo noma ukuhlanza kudlula i-$350, uzoba nesibopho sezindleko.
USead Ungumbungazi ovelele